DRLM: mpitantana fanarenana loza voajanahary ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Luigys toro | | fampiharana, GNU / Linux, Tambajotra / seriver
Androany izay isaorana phico, efa nifamezivezy be izahay laboratoara mpizara manokana, Mila manokatra ny làlana mankany amin'ny Fanarenana ny voina ary na dia fantatro aza fa amin'ny fotoana mahamety azy dia hiditra amin'ity asa midadasika sy manan-danja ity ny FICO dia nandray ny fahasahisako aho nanolotra fitaovana iray loharano misokatra antso vaovao DRLM (Disaster Recovery Linux Manager).
Tsara ny manamarika fa na dia vao 3 taona aza ny fampandrosoana ny DRLM dia efa nampiharina tamin'ny orinasa samihafa, manasongadina ny fampiharana ao GRIFOLS izay orinasa lehibe indrindra faha-3 amin'ny sehatry ny vokatra ra eto amin'izao tontolo izao ary voalohany ao Espana.
1 Inona ny Disaster Recovery (DR)?
2 Inona no atao hoe DRLM?
3 Iza no tokony hampiasa DRLM?
4 Fomba fiasa DRLM
5 Ahoana ny fametrahana DRLM
6 Fijery voalohany an'ny DRLM
Inona ny Disaster Recovery (DR)?
Ny fanarenana ny voina o Fanarenana ny voina araka ny fantatra amin'ny teny espaniola, izy io dia ahitana politikam-pitsipika sy fombafomba mamela ny famerenana na fikojakojana ireo fotodrafitrasa teknolojia (fitaovana, serasera, tambajotra ...) ary rafitra lehibe aorian'ny loza voajanahary na hadisoan'ny olombelona.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa iharan'ny fahasimbana na amin'ny tsy fahombiazan'ny rindrambaiko na amin'ny fiasan'olombelona na voajanahary ny rafitra Linux, dia fantatra ho toy ny Fanarenana ny voina. Ny antony lehibe mahatonga ny fahaverezan'ny serivisy ankehitriny dia azo jerena amin'ity tabilao manaraka ity.
Mba hanomezana topy maso ny maha-zava-dehibe ny drafitra Fanarenana Disaster, dia mamela am-bika antontan'isa vitsivitsy tena manazava izahay.
"Amin'ireo orinasa niaritra fatiantoka be dia be dia be ny 43%, ary 29% no nakatona afaka roa taona."
"Isaky ny € 1 ampanjariam-bola amin'ny drafitra alohan'ny loza, dia mety hidika ho fanangonan-karena € 4 ho setriny sy fanarenana raha sendra misy izany."
Inona no atao hoe DRLM?
Disaster Recovery Linux Manager fitaovana io loharanom-baovao misokatra, vita amin'ny bash, izay mamela antsika hitantana ny mamorona sy mamerina amin'ny laoniny ny backup Linux, afovoany sy amin'ny alàlan'ny tamba-jotra. Izany hoe, mamela anao DRLM hanana kopian'ny mpizara anay rehetra ary hamerina azy ireo raha sendra loza.
DRLM dia nanao ezaka lehibe hampifangaro ReaR (Miala sasatra sy sitrana) amin'ny sehatra misy anao, noho izany amin'ny fampiasana DRLM dia miankina amin'ny teknolojia ny aoriana. Ny ataon'ny DRLM dia ny fahitana fa mifantoka amin'ny fitantanana fotodrafitrasa lehibe na tsy mitsaha-mitombo io teknolojia io.
Amin'ny teny ankapobeny, ity fitaovana matanjaka ity dia manolotra antsika ny serivisy ilaina rehetra hanombohana famerenana ny rafitra Linux ao anatin'ny minitra vitsy. Ho fanampin'izany, manome fitaovana mora ampiasaina be dia be isika hamoronana ny masonkarena ny fotoana, ny toerana ary ny fomba tokony hanaovantsika kopia voafafa ary hamerina azy ireo.
Ny fizotra anatiny ataon'ny DRLM amin'ny famoronana sy famerenana amin'ny laoniny ireo kopia nomaniny ho solon'izay dia azo jerena amin'ny antsipiriany amin'ireto sary manaraka ireto.
Azontsika atao ny mamantatra bebe kokoa momba ny DRLM amin'ity horonantsary manaraka ity, izay nataon'ny iray tamin'ireo mpanorina azy tamin'ny fotoana OPEN Expo 2016.
Iza no tokony hampiasa DRLM?
Ity fitaovana ity dia natao ho an'izay manana serivera mifandray amin'ny tamba-jotra (na fantsona tsotra tsy maintsy arovana). Izany hoe, na dia amin'ny ankapobeny aza dia noforonina izy mba hamahana olana iray izay misy fiantraikany mivantana amin'ny foibe angon-drakitra lehibe, ny olona na ny mpampiasa farany dia afaka mampiasa azy io hitazomana ny politikam-pitsaboana.
Fitaovana iray izay azon'ny tsirairay ampiasaina, ny sekoly, ny anjerimanontolo, ny SME, ny Startup, ny Governemanta ary ireo fikambanana rehetra mampiasa ny rafitra fiasa Linux.
Fomba fiasa DRLM
Fitantanana ifotony ny fitadiavana fampahalalana amin'ny Linux.
Tatitra mandeha ho azy avy amin'ny Mail, Nagios, Zabbix na HP OVO, raha sendra tsy fahombiazana amin'ny famoronana na famerenana amin'ny laoniny ny backup.
Fanarenana tambajotra feno (PXE) tsy mila haino aman-jery hafa toy ny CD / DVD / USB hanombohana fanarenana.
Fanamorana ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fanasarahana ny asan'ny mpanjifa, ny tamba-jotra ary ny backup amin'ny CLI.
Fifindra-monina P2V, P2P, V2P ary V2V.
Fitaovana DR mitovy amin'ny rafitra virtoaly na ara-batana.
Fanohanana ireo sehatra HW marobe.
Famahana olana amin'ny drlm CLI sy ny masontsivana.
Nivoatra tanteraka tamin'ny bash.
Ahoana ny fametrahana DRLM
Tena mora ny misintona sy mametraka DRLM, raha ny dikan-2.0.0 (novaina farany indrindra) dia azonao atao ny mampiasa ireto rohy fampidinana manaraka ireto araka ny filanao tgz | Zip | deb | isa-minitra
Ny rohy 2 voalohany dia mitondra antsika any amin'ny kaody loharanom-pitaovana amin'ilay fitaovana, izay tsy maintsy manangona sy mametraka azy, avy eo aseho ireo fonosana fametrahana .deb y .rpm izay azo apetraka amin'ny mpitantana tianao.
Fijery voalohany an'ny DRLM
Raha vantany vao mametraka DRLM isika, dia afaka miditra amin'ny safidiny rehetra amin'ny alàlan'ny CLI, izay tsy maintsy idirantsika amin'ny fidirana faka.
Hiverina avy hatrany ny andiana safidy azontsika atao miaraka amin'ilay fitaovana.
Raha hijery ireo masontsivana izay tsy maintsy aseho amin'ny fampiasana baiko tsirairay 'drlm COMMAND --help', hamerina fampahalalana amin'ny antsipiriany isaky ny baiko io.
Tsara ny manamarika fa ny DRLM dia miasa miaraka amin'ireo kopian'ny Network fa tsy mila mampiasa kapila ara-batana akory, noho izany ny fampiasana lafatra dia tontolo iray izay itantanana backups amin'ny alàlan'ny tambajotra.teorika ny fomba marina hanaovana azy ankehitriny).
Nilaza ny mpamorona azy ireo fa afaka mampiasa ny backup Linux ao anatin'ny 5 minitra ianao amin'ny fampiasana ny fitaovany.Amin'ny backups misy data kely).
Famaranana, manolo-kevitra izahay hampiasa sy hizaha toetra ity fitaovana ity amin'ny tontolo fampandrosoana ary avy eo hametraka azy ireo amin'ny tontolon'ny famokarana, zava-dehibe ny manamarika fa ity fitaovana ity dia iray amin'ireo safidy malalaka vitsivitsy amin'ny sehatry ny fanarenana ny voina, noho izany ny fitsapana sy ny fanaparitahana ny Ilaina tokoa ny fisian'ny fitaovana vaovao amin'ity faritra tena manandanja ity.
Afaka mianatra bebe kokoa momba ny DRLM ianao amin'ny drlm.org
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » DRLM: Mpitantana fanarenana voajanahary matanjaka ho an'ny Linux
Misaotra betsaka amin'ny naoty, tena mahaliana. Afaka andro vitsivitsy dia hiezaka ny hampihatra izany amin'ny orinasa iasako aho.
frack dia hoy izy:
Misaotra anao ihany
Valiny amin'ny frack
Gustavo Woltmann dia hoy izy:
Tena mahaliana ity, tokony ampihariko amin'ny solosainako izany. Na dia tsotra toy inona aza izany?
Valiny tamin'i Gustavo Woltmann
Azo atao ve ny manao izany amin'ny solosainako?
Tsy maintsy manandrana aho.
Didac Oliveira dia hoy izy:
Raha te hanandrana ianao dia zahao ny antontan-taratasin'ny tetikasa: docs.drlm.org ary raha manana fanontaniana na olana ianao dia aza misalasala manokatra olana ao amin'ny github.com/brainupdaters/drlm
Valiny tamin'i Didac Oliveira
Memory amin'ny autostart hametrahana Debian, CentOS, na openSUSE